Waa Guri Deegaan ah, kana kooban 3 Qol, Musqul iyo Jiko. Kuna yaala agagaarka #Isgoyska_SOS dhanka Degmada Yaaqshiid. Waa Guri leh Documents saxan. Cabirkiisuna yahay 15x20m2. Qiimahana waa $26,000 israac ah.
Address: Isgoyska Fagax, Mogadishu, Somalia
Guri Kiro Ah – Agagaarka Liido
Guri IIB ah - Isgoyska Fagax, Mogadishu, Somalia